Ilanga, iNyanga kunye noMqondiso oPhumayo: Iintsingiselo zazo eziyinyani zityhiliwe - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Iindlela Zokomoya Zokulawula Uxinzelelo-Uxinzelelo-Uxinzelelo
I-Anandamide-Inzululwazi-Yazi-Kude Kube Ngoku
Ilanga, iNyanga kunye noMqondiso oPhumayo: Iintsingiselo zazo eziyinyani zityhiliwe
Inyanga yakho yelanga kunye nophawu oluphakamayo ngalunye lwenza into ebalulekileyo kubuntu bakho. Isazi ngeenkwenkwezi uSusan Taylor uchaza intsingiselo esemva kwabo kunye nefuthe labo.
Ukuba uqhelene nokuvumisa ngeenkwenkwezi mhlawumbi sele uyazi ukuba yintoni uphawu lwakho lwe-zodiac (sun), kodwa ke iindaba ezimnandi zezi; kuninzi kakhulu onokukufunda! Ukumba nzulu kancinci kwiitshathi zethu zokuzalwa kutyhila ukuba ngamnye wethu unenyanga kunye nophawu oluphumayo naye; kodwa umbuzo ngulo, zithetha ukuthini? Ngaphezulu, zimele ntoni, kwaye zisichaphazela njani kubomi bethu bemihla ngemihla? Isazi ngeenkwenkwezi esisendlwini uSusan Taylor uphendula yonke le mibuzo kwaye achaze ukuba nganye yazo inegalelo njani kubuntu bakho. Funda ukuze ubale imiqondiso yakho apha kwaye ufumanise ukuba baya kukunika ntoni.
Ilanga, iNyanga kunye nomqondiso wokuPhuma ucacisiwe
Funda ngomqondiso wakho weLanga
Fumana ulwazi malunga nomqondiso wakho weNyanga
Funda malunga nophawu lwakho oluPhakamileyo
Ilanga, inyanga kunye neempawu eziphakamayo zichaziwe
Ilanga, inyanga kunye nophawu olusukayo luphawu ngalunye kwinxalenye ethile yomlinganiswa wakho. Xa zidityanisiwe, zinika inkcazo enzulu ngakumbi yokwakheka kweenkwenkwezi. Inokuba njalo Kunzima ukunxibelelana kuphela neempawu zethu zodiacac kunye neempawu ezinxulumene nazo, kodwa ukuba nolwazi kwamanye amacandelo kwitshathi yakho yokuzalwa kuya kukunceda ufumane ukuba ungubani kanye kanye.
Nazi iinkcazo zokoqobo zecandelo ngalinye leenkwenkwezi kunye neempembelelo zazo:
Umqondiso welanga / uphawu lweZodiac: Ichaza indalo yakho esisiseko.
Uphawu lwenyanga: Ulawula iimvakalelo zakho, ubufazi kunye novakalelo.
Umqondiso wokunyuka: Iimpembelelo kwindlela abanye abantu abakubona ngayo kunye nefuthe lenkangeleko yakho.
Umqondiso welanga: Lo ngowangaphandle 'wena'
Uphawu lwelanga elaziwa ngokuba luphawu lwakho lwe-zodiac into oyikhuphileyo emhlabeni.
Umqondiso wakho weLanga ubhekisa kwi isikhundla selanga kwitshathi yakho yokuzalwa. Ukuba ngexesha lokuzalwa kwakho, ngoJanuwari 13, umzekelo, iLanga laliseCapricorn, ke uphawu lwakho lwe-zodiac yiCapricorn.
Uninzi lwabantu luzazi kuphela iimpawu zazo zelanga kuba iihoroscopes zethu zisekwe kuzo. Ukubala le nto, yonke into ekufuneka uyazi ngumhla wakho wokuzalwa. Ngapha koko, xa sizalwa, kuthiwa sithatha ngokukhawuleza iimpawu ezinxulumene nolu phawu, oluchaza ukuba kutheni le nto ifuthe kwindlela abanye abantu abasijonga ngayo.
Umqondiso wakho welanga / we-zodiac umele eyona nto uyiyo kwaye ibonisa amandla akho, isimo sakho sengqondo kunye nokuqonda kwezinto. Isinika isishwankathelo sakho iinkanuko kunye nezinto ezikukhuthazayo ebomini. Ngamafutshane, ubuntu bakho obukhethekileyo benziwe luphawu lwenkwenkwezi yakho, kuxhomekeke kwindawo ekuyo kwitshathi yakho yokuzalwa.
-Funda phezulu kwiimpawu ze-12 zodiac apha! -
Ukuba uphawu lwakho lwelanga luku:
Yomelele kwaye ingxamisekile
Isengqiqweni kwaye izinzile
Isendle kwaye iyajikajika
Unomdla kwaye unothando
Ukuthanda kunye nokungenanto
Smart kunye nengqiqo
Ethereal kwaye unobubele
Ekhaliphile kwaye egxile
Ukuvuya kunye nokuhlekisa
Ukukhathalela kunye namandla
Ukupha kunye nokonwaba
Ubuchule kwaye uyaphupha
Ngaba ujonge uthando lokwenene nolonwabo?
Uphawu lwenyanga kunye nencazelo: Oku kwaziwa ngokuba 'kukumnyama'
Isibonakaliso sakho seNyanga sinxulunyaniswa nendawo yeNyanga kwitshathi yakho yokuzalwa.
Eli candelo libhekisa kulo amacala anzulu kunye neemvakalelo zobuntu bakho. Kude kuthiwe sisitshixo sokuvula umphefumlo wakho. Njengokukhanya kwenyanga okufipheleyo, iimpawu ezinxulunyaniswa nale nto azibonakali kwangoko ngenxa yokunqongophala kokukhanyisa. Eli nqaku lijongelwe phantsi kwaye lihambelana ne iimpawu abantu abazibambayo ekuboniseni.
zeziphi iimpawu ezihambelana neearies
Ewe, iimpawu zeLunar zibaluleke ngakumbi kubafazi kunamadoda, kuba kunjalo ehambelana nokuziphatha kunye nobufazi. Ukuba iNyanga yakho ikwiLeo umzekelo, ukhona kunokwenzeka ukuba ibalasele kwaye inyanzelise kakhulu. Ngokubhekisele emadodeni, imiqondiso yabo ayicacanga kodwa okwangoku isekhona.
INyanga inxulunyaniswa neemvakalelo zethu kunye neemvakalelo ezinzulu esingasoloko siziva sikhululekile ukuzichaza kwabanye abantu. Ngokufihlakeleyo abantu bahlala bechonga ngakumbi ngeli candelo ngaphezu komqondiso wabo welanga kuba bayoyika ukubeka iziqu zabo phaya.
- Bala uphawu lwenyanga yakho apha -
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga lukho:
Ukuphelelwa ngumonde nokuzimela
Iququzelelwe kwaye igcinwe
Umtsalane kwaye uncokola
I-bossy kunye neengcinga
Amabhongo kwaye azinikele
Efanelekileyo kunye ne-flirty
Uthembekile kwaye ngumntu ngamnye
Uncedo kwaye uyathandeka
Uvakalelo kwaye ukhaliphile
Unomona kwaye unomdla
I-Ascendant okanye uphawu oluphakamayo lwentsingiselo: Oku kukujula ngakumbi
Umntu wakho onyukayo ubizwa ngokuba 'ungaphakathi kuwe'.
Umqondiso okhulayo ngumqondiso kumazantsi empuma ngexesha lakho lokuzalwa. Iyahambelana ke neempawu onazo phaya phandle ukuze ihlabathi libone kunye nento abahlobo bakho kunye nosapho onxulumana nayo. Eli candelo lomlinganiswa wakho libaluleke ngokulinganayo njengelanga nenyanga, kwaye liyanceda ukugqiba iphazili enobuntu bakho.
Ifuthe kwisitayile sakho, ukujonga kunye nendlela ozibonakalisa ngayo kwabanye abantu. Ibhekisa kwiindawo zobuntu bakho ozikhethileyo ukuba uzibonise kwaye unyikime; ezo zikwenza ubalasele kwaye ukhetheke.
Iimpawu zethu ezikhulayo ngokulinganayo ibalulekile emadodeni nakwabafazi kwaye uncoma imiqondiso yeenkwenkwezi. Ukuba umqondiso wethu we-zodiac kunye nokwenyuka kokubini bangamalungu eqela elinye, umzekelo uMhlaba, emva koko, sinokulindela ukuba izinto ezinobuzaza, eziyinyani kunye nezilungelelanisiweyo zibe namandla ngakumbi. Ukuba umzekelo ukuphakama komqondiso wethu kwahluke ngokwahlukileyo kuphawu lwethu lwe-zodiac, njenge-Aries sun Capricorn inyuka, uninzi lweengxabano kunye nokuphikisana kunokubonwa kwangaphambili.
- Luyintoni uphawu lwam olunyukayo? Zoba apha! -
kutheni ingama-666 inani elingalunganga
Ngaba uphawu lwakho olukhulayo lunokutshintsha?
Suku, yiyo soze itshintshe, nokuba sowumdala. Ayinakuguqulwa kuba inxulunyaniswa nomhla wakho, ixesha, kunye nendawo yokuzalwa kwakho. Lo mqondiso uyinxalenye yetshathi yakho yokuzalwa, eyenza ukuba ibe sisigxina seenkwenkwezi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luku:
I-Smart kwaye ijolise
Yinyani kwaye ivulekile
Inomdla kwaye isilumko
Uthobekile kwaye unengqiqo
I-Charismatic kunye nokwamkela
Avant-garde kwaye ukhaliphe
Ukujonga okuhle kunye nokuyila
Yomelele kwaye izinzile
Yoqobo kunye nombono
Unomonde kwaye uyanyamezela
Ukuba ukonwabele ukuqonda kukaSusan Taylor, lungisa apha kwaye ujonge ezinye iingqikelelo.
Fumana ikamva lakho, i-horoscope yethu yemihla ngemihla, kwaye ufunde malunga nokuba kutheni ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthandwa kangaka.
Luthini uphawu lwam lwe-zodiac yase-Egypt?
Fumana uqikelelo lwakho lonyaka kwi-horoscope 2021
Funda kwizindlu zakho zeenkwenkwezi
* Umthombo woncwadi: Incwadi ekukuphela kwayo ngeNkwenkwezi oya kuyidinga, Umbhali; UJoanna Martine Woolfolk, Ipapashwe ngo-2012 kwaye iyafumaneka apha: IAmazon-Eyona ncwadi yeAstrology oya kuyidinga
Izigqibo zoNyaka oGqibeleleyo zoSuku ngalunye lweZodiac Sign ngo-2021
Inombolo yesi-7 yeentsingiselo kuLwazi lokuBala: Isiphiwo sobuGcisa
Umbingeleli oMkhulu: Ukungaqiniseki, uxinzelelo kunye namathandabuzo
Ezona ndawo ziHlangayo ze-Erogenous ngokusekwe kuPhawu lwakho lweZodiac
Ukufundwa kweKhadi lakho leTarot ngenyanga
Kutheni le nto iPlanethi ye-Uranus ibaluleke kangaka kwi-Astrology?
Haheuiah, Ingelosi ekhuselekileyo ikukhusela kwisiseko semihla ngemihla
UNithael, iNgelosi yoMgcini efuzisela ukuva kunye nokulingana
Ingelosi ka-Anauel Guardian: Umfuziselo Wenkalipho kunye nokulwa
Iingcebiso Kubudlelwane. Fumana Indlela Yakho Yokuthanda Kunye Nokonwaba.
Inani lomntu ongu-7
Ingelosi yaseYehuiah Guardian iyakusikelela ngeeMfanelo zobunkokeli
USheiah, iNgelosi yoMgcini eKusikelela ngeMpilo kunye nokuPhila ixesha elide
I-Caliel Guardian Angel, uphawu lwezoBulungisa neNyaniso
Ukuhambelana kwePisces kunye neCapricorn: ♥ Esi sisibini esinye esimnandi
yintoni ukubaluleka kwe-111
yintoni uphawu lwenyanga
umhlaza kunye nolwalamano lwe-aquarius
ii-aries zeziphi izinto
intsingiselo yenombolo 444
Copyright ©2022 Onke Amalungelo Agciniwe | juergenhaenggi.ch | Umthetho Wabucala